Chakra Archimedes (2012-02-12) ayaa la sii daayay. KDE 4.8 waxay u guurtaa keydka xasilloon (Core) | Laga soo bilaabo Linux
Chakra Archimedes (2012-02-12) ayaa la sii daayay. KDE 4.8 waxay u guurtaa bakhaar xasiloon (Core)
Tag raggaani si dhakhso leh ayey u dhaqaaqaan, dhowr saacadood ka hor ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay soo saarista nooca cusub Archimedes kaas oo naga siiya waxyaabo kale:
Linux kernel 3.2.2 (2.6.35.14 ikhtiyaari ah)
tomoyo-tools 2.5 ayaa lagu daray rakibaadii hore, si loo helo fursado badan oo nabadgelyo
wqy-microhei wuxuu noqday farta cusub ee loogu talagay luqadaha Shiinaha / Jabbaan / Kuuriya
Hordhaca farshaxanka cusub ee Ronak (oo runtii aad u fiican !!!;))
Waxaan kala soo bixi karnaa ISO-ga DVD-yada iyo CD-yada. Nooca CD-ga ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad rakibto desktop-ka aasaasiga ah iyo midka ugu yar, oo ay ka mid yihiin: tifaftiraha qoraalka, maareeyaha faylka, web browser-ka iyo aaladaha fudud ee multimedia. Ma jiraan barnaamijyo dheeri ah, ma jiro xirmo luqadeed. Nooca DVD-ga waxaa kujira dhamaan xirmooyinka luuqada, inta badan barnaamijyada KDE, LibreOffice 3.4.5, Amarok, kde-telepathy, SpiderOak, taageeraha daabacaada, Minitube, k3b, kaliya in la xuso wax yar.
Nota: Faylasha Chakra ISO kuma jaan qaadi karaan Unetbootin, iyo CD / DVD 'waxay u baahan yihiin in lagu gubo xawaare aan ka badnayn 4x.
source: Ogeysiis rasmi ah.
Degso xiriiriyaha: ISO-da.
KDE 4.8 waxay u guurtaa keydka xasilloon (Core)
Ka dib ku dhawaad ​​3 bilood baaritaanka, KDE 4.8 waxaa lagu soo daray keydka xasilloon (Core). Sida had iyo jeer, iyo gaar ahaan munaasabaddan, ayaa lagu talinayaa HA ISTICMAALIN Appset cusbooneysiintan, oo lagu daray talooyinka soo socda:
Si taxaddar leh u akhri dhammaan tilmaamaha uu soo saaray pacman oo ka jawaab «haa»Dhammaan su'aalaha beddelaadda xirmada.
Ka dib markii cusbooneysiinta si guul leh loo dhammeeyo, dib u bilow nidaamka.
Hadda waxaa haray oo keliya in la sugo dhammaan muraayadaha in la cusbooneysiiyo si ay awood ugu yeeshaan KDE 4.8 kombiyuutarada ay ka soo jeedaan: D.
source: Ogeysiis rasmi ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Chakra Archimedes (2012-02-12) ayaa la sii daayay. KDE 4.8 waxay u guurtaa bakhaar xasiloon (Core)
Hadda waxaan isticmaalaa Kubuntu, laakiin jihada ay u dhaqaaqi doonto lama garanayo, waxaan u maleynayaa inaan isku dayi doono Chakra laakiin PC-ga kumbuyuutarka ah si aan ula wareego ...
Xaqiiqdii waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee layaabka leh kde, sidoo kale waxay abaabuleen sahan loogu talagalay softiweerka oo ay ku jiraan DVD-ga waxna laguma qaban karo.
Man, dabcan, Canoni $ oft wuxuu si aad ah u caddeeyay: "Tani ma aha dimuqraadiyad"
Si aan u dhaadhaco, waxaan sugayay tan in aan dib u rakibo: D.
Sisas dadkaan waxbadan ayey shaqeeyaan waxayna umuuqataa in Akabei uu bilaabayo sanadkaan sida ay sheegeen, iyo Linux Chakra 2012.02 haddii laga rakibi karo USB-ga leh "LinuxLive USB Abuuraha" laga yaabaa in la aan kala bixin Waxba ma qaban kartid xitaa haddii aadan isku dayin ... Waan jeclahay sida ay u xirtaan Qupzilla waxay ku sameeyeen xoogaa isbeddello ah muuqaalladooda haddana waxay u muuqataa mid aad u yar, waan jeclahay.
Raggu waxay xayeysiiyaan sheydaan aan u maleynayo inay aad hoos ugu dhaceyso shaqada weyn ee aad ku qabato iyo sida dareeraha u yahay.
Ma la imanaysaa Koodhadhka lagu daray ee rakibidda fudud?
Ha noqon caajis nin maya, way fududahay in la rakibo sida kuwa kale laakiin waa wax fudud.
Koodhadhka ayaa lagu rakibay xariijin terminal, ama waxaad rakibtay VLC oo horeyba u keentay
Waxaan khalday comma, waxay ka horeysaa maya ...
Haa saaxiib, horeyba waa loo rakibay warshad. Haddii aad ku dhiirrato inaad tijaabiso, waxaan kuu xaqiijinayaa inaadan ka qoomameyn doonin 😉
Kaliya waxaan u cusbooneysiiyay Chakra illaa KDE 4.8 iyo kala duwanaanshaha, waxqabadka, xawaaraha, iyo dabeecadda, ayaa aad u muuqda. Runtii waan jeclahay habdhaqanka Dolphin. Hagaag, waxaan dareemayaa in Chakra ay dhaqso u socoto.
Haa, farqiga udhaxeeya KDE 4.7.4 iyo KDE 4.8 waa wax layaableh, kala duwanaanshaha waxqabadka runtii waa wax aad u xun.
+1 ... Waan layaabay, xitaa elav wuxuu aqoonsanyahay in waxqabadku waxbadan hagaajiyay 😀
Aniga tan labaadna sidoo kale, aniga oo ku isticmaalaya shabakadda Atom ee leh 1gb aad ayaan ula dhacay sida ay u shaqayso. Sababtoo ah.
Runtii? Anigu waxaan ka mid ahay bey'adihii ugu horreeyay ee desktop ee aan isku dayay inay ahayd KDE oo ay la socoto Fedora 16 muddo dheer ka hor waana jeclaa, laakiin dabcan ma jiro wax hagaajin ah ama wax la mid ah, ma fiicnayn, waxaan haystaa netbook leh 2gb wan oo wan iyo atam at 1.86Ghz, Waa hagaag, waan ku dhiiran doonaa inaan isku dayo!
Waxaan runtii rabaa inaan tijaabiyo gaar ahaan nooca loo yaqaan 'kernel'. Faa'iido darrada ayaa ah in uusan jirin hal durdur oo laga soo dejisto.
Haddii daadad la heli karo: http://www.chakra-linux.org/get/
Halkaas waxaad ku dooraneysaa nooca aad rabto, DVD (Buuxda) ama CD-ga (Ugu Yar).
ahhh ma aanan gaarin mahadsanid. Markii ugu dambeysay ee ay igu dhacdo xD
Waad salaaman tihiin asxaabta, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan rakibo OS-gaan, laakiin dhibaato ayaan qabaa, taasna waa inaan joojiyaa nolapic.
Ma i bari kartaa sida loo sameeyo, fadlan? Hagaag, tartiib tartiib ah, haddii kale, waan lumay ... hehe
Talo soo jeedin, si fiican uga codso golaha inay awood kuu siiso inay ku siiso caawimaad fiican iyo inaad si fiican u muujin karto naftaada:
Waad salaaman tihiin asxaabteyda, waxaan ku rakibey Chakra duuggeygii hore ee Dell Latitude D510 laakiin dhibaato ayaa i haysa, markaan rakibo darawalka kaarkayga siligga, waa ipw2200, aniga ima shaqeyso aniga, markaan dib u cusbooneysiiyo moduleka wuxuu aqoonsan yahay qalabka, laakiin Waa inaan sameeyaa mar kasta oo aan dib u billaabo kumbuyuutarkeyga, haddii qof garanayo sida loo xalliyo waan ku qanacsanahay.
Ku jawaab Mezcal
ma isku dayday inaad ku darto /etc/rc.conf?
Amarka aad ku buuxiso gacanta?
Sababtoo ah haddii aad amarkaas geliso /etc/rc.local… taasi waa intaas, markaan bilaabayo laptop-ka si otomaatig ah ayuu u rari doonaa 🙂
RankingLinux.com Khadka Tooska ah
Sida loo: Rakibidda Raadiyaha Chakra Linux